သိကောင်းစရာများ - - Tele RELAY တစ်ခု 4G ကြိမ်နှုန်းကောင်းစွာစမတ်ဖုန်းနှင့်အော်ပရေတာလက်ထပ်ထိမ်းမြား
မူလစာမျက်နှာ » အကြံပြုချက်များ "frequency 4G: ပေမယ့်လက်ထပ်စမတ်ဖုန်းနှင့်အော်ပရေတာ - သိကောင်းစရာများ
သိကောင်းစရာများ - 4G ကြိမ်နှုန်းကောင်းစွာစမတ်ဖုန်းနှင့်အော်ပရေတာလက်ထပ်ထိမ်းမြား
တကယ် 4G ပျော်မွေ့နေတဲ့စမတ်ဖုန်းပွဲပေါ်တွင်ရရှိနိုင်ပါသည်ကြိမ်နှုန်းရွေးချယ်ထားသောအော်ပရေတာကအသုံးပြုသူတွေကိုလိုအပ်သည်။ ရှင်းလင်းချက်။
အဆိုပါဖိုက်ဘာထိုက်အမြန်နှုန်းနှင့်အတူခေါင်းလောင်းနှင့်စီများမှုတ်ကတိပေးထားကြောင်း 5G ၏ထွန်း, အထူးသဖြင့်အင်တာနက်ပေးခြင်း, အကြီးအကျယ်မိုဘိုင်းနှင့်အတူဒေတာဖလှယ်ဖို့အော်ပရေတာကအသုံးပြုသော 4G အထိ လူအပေါင်းတို့အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုများ။
သာ, ဒီမှာ ဒါကြောင့်ဒီနည်းပညာကိုအပြည့်အဝအားသာချက်ယူတဲ့ High-end စမတ်ဖုန်းရှိသည်ဖို့လုံလောကျမဟုတျပါဘူး။ အမှန်စင်စစ်ဥရောပ၌အသုံးပြုသော LTE ကို 4G အများအပြား frequency band (ဆက်သွယ်ရေး၏ဗန်းစကားအတွက်လေယာဉ်တင်သင်္ဘော) လုပ်ကိုင်လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။ B28 (700 MHz), အ B20 (800 MHz), အ B3 (1800 MHz), အ B1 (2100 MHz) နှင့် B7 (2600 MHz): ပြင်သစ်မှာတော့ငါးကြိမ်နှုန်းတပ်သားတို့သည်အာဏာပိုင်များကခွင့်ပြုထား။ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုသို့သွားစရာမလိုဘဲနှင့်ရိုးရှင်းစွာ ထား. , အသုံးပြုတဲ့ကြိမ်နှုန်းမြင့်မားခြင်း, နိမ့် signal ကိုဝေးပိုကောင်းသယ်ဆောင်ကြောင့်အိမ်၏နံရံဖြတ်သန်းသွားသည်။ အော်ပရေတာပိုမိုလွယ်ကူစွာကျေးလက်ဒေသကိုဖုံးလွှမ်းရန်အခြို့သောအချိန်များအတွက်တပ်သား၏အသုံးပြုခြင်းနှင့် B28 B20 မျက်နှာသာအဘယ်ကြောင့်ဒီအလည်းဖြစ်ပါတယ်။
သို့သော်အရေးကြီးသောအရာမဟုတ်ပါ: အကယ်စင်စစ်သူတို့အမြတ်ထုတ်ခညျြအနှောရှေးခယျြသူအသုံးပြုသူများသည်, ဒါပေမယ့်အော်ပရေတာမဟုတျပါ။ ထိုမျှမကလူတိုင်းတွင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်အဖြစ်, နည်းပညာပိုင်းစီးပွားရေးနှင့်သမိုင်းဆိုင်ရာနှစ်ဦးစလုံးအကြောင်းပြချက်များအတွက်, တူညီတဲ့ဦးစားပေးရှိပါတယ် အဆိုပါအော်ပရေတာများနှင့်ကြိမ်နှုန်းနှင့်အညီဝန်ဆောင်မှုအတွက်အင်တင်နာ 4G မြို့တော်၏နံပါတ်အကျဉ်းချုပ်ထားတဲ့အောက်ကစားပွဲ။ ထို့ကြောင့်အခမဲ့မိုဘိုင်းငါးခုသာသုံးခညျြအနှောကိုအသုံးပြုသည်: မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ B3 t ကို B7 နှင့် B28 - ဒီကြိမ်နှုန်းအပေါ်တောင်မှအများဆုံးအဆင့်မြင့်ဖြစ်ပါသည် - SFR ရုံအောက်မှာအများကြီး B3 နှင့် B20 လည်ပတ်စဉ် B1 နှင့် B7 နှင့်ခဲယင်း B28 ။
အဆိုပါမြို့တော်အတွင်းအော်ပရေတာနှင့်အတူဝန်ဆောင်မှုအတွက် 4G အင်တင်နာအရေအတွက်
(Source: ANFR - သြဂုတ်လ 2019)
Bouygues တယ်လီကွန်း 1 121 16 564 10 542	26685113
အခမဲ့မိုဘိုင်း7471	012 261012 565
လိမ္မော်သီး 315 17 216	 12 815	6877	9218
စမတ်ဖုန်းများ၏ Compatibility ကို Check
Or အားလုံးတံဆိပ်ထု 4G စမတ်ဖုန်းအားလုံးကြိမ်နှုန်းနှင့်သဟဇာတမဟုတ်။ ဤသည်အထူးသဖြင့်မကြာခဏအမြင့်ဆုံးကြိုးနှင့်ချည်နှောင် (B1, B3 နှင့် B7) စီမံခန့်ခွဲသည့်တရုတ်အတွက်တင်သွင်းမော်ဒယ်များ၏အမှုဖြစ်ပါတယ်။ ဆက်ဆက်, အဓိကအမှတ်တံဆိပ်လှိုင်း၏ဆင့်ကဲနောက်တော်သို့လိုက်ခဲ့ကြပြီးအားလုံးနီးပါးမကြာသေးမီစမတ်ဖုန်းငါးခုပြင်သစ်ခညျြအနှောစီမံခန့်ခွဲ။ ဒါပေမယ့်ဒုတိယလက်ဈေးကွက်တွင်တွေ့လျက်ရှိသောသူတို့ကိုအပါအဝင်အဟောင်းတွေမော်ဒယ်များ, အချို့သောအော်ပရေတာနှင့်အတူပြဿနာများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ဒါဟာသဟဇာတကြိမ်နှုန်းစစ်ဆေးနေစမတ်ဖုန်းနှင့်အော်ပရေတာနှင့်တွဲဖက်ရန်ထို့ကြောင့်အရေးကြီးပါသည်။
ဒီကျနော်တို့လုပ်နိုင် တူသော site တစ်ခုကိုသုံးရန် Kimovilမည်သည့်စမတ်ဖုန်းအပေါငျးတို့သနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ features တွေသိရန်ခွင့်ပြုသော - အလွန်ရှားပါးမော်ဒယ်များ - ဤသို့လှိုင်းများ၏ Compatibility ကိုစစ်ဆေးရန်။
ဥပမာအားဖြင့်, တစ်ဦးက Samsung Galaxy S9 - မကြာသေးမီအကွာအဝေး၏ထိပ်တန်းမော်ဒယ် - ကောင်းစွာငါးပြင်သစ် 4G ခညျြအနှောစီမံခန့်ခွဲ, ထို့နောက်တစ်ဦး Xiaomi က Redmi 6A - မကြာသေးခင်က Entry-level ကိုမိုဘိုင်း - သာလေးအသိအမှတ်ပြု, Huawei က P30 Lite ကိုအဖြစ်။ အော်ပရေတာပေါ် မူတည်. ကြောင့်ထို့ကြောင့်လုံးဝသို့မဟုတ်သာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအား 4G မှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိလိမ့်မည် ...
ထို့အပြင်ခုနှစ်, 4G ၏နေ့စဉ်အသုံးပြုအများဆုံးနှစ်သိမ့်စေရန်, ကပေးထားသောဧရိယာ၌အင်တာနာ၏တည်နေရာကိုသိရန်လည်းအရေးကြီးပါသည်။ မရအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်အပေါင်းတို့, သိပ်သည်းဒေသများရှိရေတွင်းဖြစ်ပါသည် - မြို့ကြီးများတွင် - အားလုံးအော်ပရေတာကောင်းစွာအများအပြားအင်တာနာနှင့်အတူထူထောင်ကြသည်ရှိရာယေဘုယျအားဖြင့်မခွဲခြားဘဲစမတ်ဖုန်းအပေါငျးတို့သကြိမ်နှုန်းကိုပူဇော်သက္ကာဘို့နှင့်အော်ပရေတာအတွက်အာမခံချက်ခဲ့သည် အဆိုပါ 4G ရှိသည်။ ဒါပေမယ့်ကိုဖုံးလွှမ်းဖို့ပိုပိုင်နက်အတူတာဝါတိုင်ရှားပါးရှိရာကျေးလက်ဒေသများရှိကွဲပြားခြားနားသည်။ အထူးသဖြင့်ကတည်းက, တဖနျ, ထိုလူအပေါင်းတို့သည်အားလုံး 4G ကြိမ်နှုန်းနှင့်သဟဇာတမရှိကြပေ။
အဆိုပါအော်ပရေတာများ၏အကောင်အထည်ဖော်မှုအတည်ပြုရန်တစ်ဦးချင်းစီအင်တင်နာ၏တိကျသောဝိသေသလက္ခဏာများကိုသိပါကအကြံပြုသည် ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်အထူးပြုက်ဘ်ဆိုက်များတိုင်ပင်ဆွေးနွေး မိုဘိုင်းအင်တာနာ ou အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကြိမ်နှုန်းအေဂျင်စီ (ANFR) ၏စောင့်ကြည့် အပြန်အလှန်မြေပုံပေါ်မှာအသုံးပြုတဲ့ကြိမ်နှုန်းနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအော်ပရေတာများအတွက်အင်တာနာ၏တိကျသောအနေအထား, ညွှန်ပြ။
ထို့ကြောင့်တည်နေရာနဲ့အသုံးပြုတဲ့စမတ်ဖုန်းအတွက်အော်ပရေတာပေါ် မူတည်. ကြီးမားသောခြားနားချက်များရှိနေတုန်းပဲဖြစ်ကြောင်းမှတ်ချက်ပြုသည်အနည်းငယ်အဟောင်းတွေမော်ဒယ် - နှစ်ခုသို့မဟုတ်သုံးခုနှစ်ပေါင်း - ကောင်းစွာတစ် 4G မြို့ခံယူပေမယ့် 3G အတွက်ဖမ်းတက်အဆုံးသတ်စေခြင်းငှါ အချို့ဒေသများတွင်။
အဆိုပါအော်ပရေတာများနှင့်အီလက်ထရောနစ်ဆက်သွယ်ရေးနှင့်စာတိုက်များအတွက်စည်းမျဉ်းအာဏာပိုင် (ARCEP) အကြားသဘောတူညီချက်သည်အောက်ပါ - - နောက်ဆုံးတော့နှစ်အနည်းငယ်အတွက်ကိစ္စအပေါငျးတို့သပိုင်နက် 4G ဖြင့်ဖုံးလွှမ်းထားရမည်ဖြစ်သောကြောင့်ရှည်ရှိုးမည်မဟုတ်အပေါင်းတို့နှင့်တကွ စမတ်ဖုန်းများအသွားအလာငါး frequency band စီမံခန့်ခွဲပါလိမ့်မယ်။ သို့သော်ဤဤအရပ်မှအမှု, မော်ဒယ်သို့မဟုတ်အထုပ်ပြောင်းလဲနေတဲ့ရှေ့တော်၌ထို Compatibility ကိုမိုဘိုင်းအော်ပရေတာစစ်ဆေးရန်လိုအပ်ကြောင်းမဟုတ်ပါဘူး ...
ကနျြးမာရေးကိုအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်နေချိန်မှာလူများ၏ 95% သံပုရာဤအမျိုးအစားကိုဝယ် - ကျန်းမာရေး PLUS MAG
ဗေဒင်: အဆိုပါ5အများဆုံးစိတ်ခံစားမှုရာသီခွင်အရိပ်လက္ခဏာ (သူတို့နှလုံးရဲ့လမ်းညွှန်) - ကျန်းမာရေး PLUS MAG
BGR - ဤအပိုကြီးမားလေကောင်းလေ fryer $ 170 ရောင်းခံရဖို့လည်းကောင်းလှ၏
တစ်ခုချင်းစီကိုသစ်ကိုရုပ်ရှင်လာမည့်လတွင်လာမယ့်စီးရီးများနှင့်ထွက်လာသမျှ - BGR
ပြည်သူ့: "ဒါဟာအရုပ်ဆိုးပဲ!": ဆိုဖီ Davant ၏ဓာတ်ပုံကိုကသဘာဝဟာကင်းဗတ်ပေါ်မှာသွက်ဆွေးနွေးငြင်းခုံခဲ့
မိမိအနိုင်ငံကူးလက်မှတ်, Long က Long ကသူရဲဘောနည်းဟုဆိုငြီးငွေ့ "သင်ငါ့ကိုသတ်လျှင်ငါ့ကိုအတူ finish ကို ... "
လူတွေ & ပုံစံမျိုးမှာနေထိုင်3,151
TECH & Telecom1,563